Fandinihana momba ny raharaha fanodinana ny tontolo iainana - Ellicott Dredges
Case Studies, Fahatsiarovana ny tontolo iainana
Farihy Kittamaqundi- Ellicott® marika 300 Swinging Ladder Dredge dia nameno ny Geotubes sy ho an'ny fanondrahana rano ao amin'ny rano
Loharano: DREDGING WORLD Mining sy Fananganana Lake Kittarnaqundi dia 27-ac. fitehirizam-bokatra any Columbia, Maryland, nalaza ho iray amin'ireo tanàn-dehibe nomanina an'i Etazonia voalohany - ary nahomby indrindra. Tamin'ny lohataona 2010, ny Fikambanana Columbia, tompon'ny farihy, dia nanakarama an'i Cashman hamafa ny antsanga sy ny tsimparifary izay nanangona hatramin'ny nananganana ilay farihy. Ny ekipa Cashman dia nitady ny tetik'asa, namantatra fanamby roa lehibe teo amin'ny lafiny lojika, ary nanomboka ny fandaminana amin'ny antsipiriany hahafahan'izy ireo mamita ny asa. Voalohany, Kittamaqundi dia tototry ny rano thyme (hydrilla vertieillata) - ny tsimparifary anaty rano misy taho maro karazana dia mety hahatratra ny halavan'ny 25 ...
Massachusetts Mikendry "Hot Spot" PCB ho an'ny fanodinana dred
Mey 1990 Loharano: Record News Records ny tompon'andraikitra momba ny tontolo iainana any Massachusetts nandany $ 14 tapitrisa hanadiavana sy handoroana “toerana mafana” an'ny biphenyls polychlorined (PCB's) any amin'ny farany ambany amin'ny seranan'i New Bedford. Ny fanadiovana dia nanadio ny antsanga tamina faritra 5 hektara teo amoron'ny reniranon'i Acushnet izay 45% ny akora simika ao amin'ny seranan-tsambo sy ireo loto mavesatra no mifantoka. Ny seranan-tsambo 1000 hektara dia manana ny PCB avo indrindra amin'ny firenena ary iray amin'ireo toerana ratsy indrindra ao amin'ny Superfund National Priorities List. Ny fandavahana ny "faritra mafana" dia natao hamehezana ny fivezivezin'ny loto ao anaty seranan-tsambo. Ny fanadiovana voalohany ...